Mana murtii waliigalaa Itoophiyaa
Galmee himannaa obbo Habtaamuu Milkeessaafaa ka jedhamuun abbaan alangaa himannaa yakka shororkeessummaa kan irratti dhiyeesse namoonni 33 kaleessa mormii himannaa irratti dhiyaatee mana murtiitti dhiyeeffatanii jiran.
Hucuu gurraacha uffanna jechuu isaaniin reebichi nu irratti raawwate jechuu dhaan illee iyyatanii jiran. Manni murtichaas deebii abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellama ka biroo kennee jira jedhu abukaatoo himatamtoota kanaa obbo Wondimmuu Ibsaa.
Namoonni kun kan to’annaa jala oolan afooshaaf walitti namoonni nu qaban injiner Girmaa Xurunaa fi Artist Girmaa Xurunaa ofumaa walitti nu qabanii ofumaa alaabaa ABO fidanii nutti hiranii ennaa to’annaa jala oollutti nuti miseensota adda bilisummaa Oromoo ti jedhanii erga amananii booda amma ofii gad dhiisamanii ala jiraachuun sirrii miti jechuu himatamtootaa abukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbataniiru.
Abukaatoo mootummaaf ragaa ta’uun kan dhiyaatan namoonni kun to’annaa seeraa jala ooluu dhiisuun, kanneen isaan walitti qabaman garuu hidhaa keessatti dararamuun sirrii akka hin ta’in obbo Wandimmuun ibsanii ol iyyannaa isaanii mana murtii ol aanaatti dhiyeeffacchuu illee beesisanii jiru.